Iyo inotonhora inotonhora - dambudziko condensation mukuchengetedza - Potato Nhau
musha AGROTECHNOLOGY Kuchengeta goho Storages
Iyo inotonhora inotonhora - dambudziko condensation mune yekuchengetedza
Nekuda kwekuwedzera kutonhora kwechando, iyo tembiricha iri pamusoro pembatatisi kana hanyanisi mune yekuchengetera inogona kudonha nekukurumidza, kana mweya uri pamusoro usina kupisa. Uye husiku hunotonhorera huchiuya.
t iri chokwadi chekuti kudzikamisa kwakadzikama kusvika kune kwakanyanya kunoitika husiku hwese munzvimbo huru dzenyika kusvika Svondo inotevera. Kusvikira zuro, nyanzvi yekuchengetedza Tolsma Grisnich atoziva mienzaniso ye 3⁰C tembiricha mutsauko pakati pechigadzirwa nemhepo, pasina kudziyisa mweya pamusoro pechigadzirwa. Ipapo condensation inotyisidzira fomu pane iyo interface.
Paul den Engelsen anoshandira Tolsma Grisnich kumabvazuva kweNetherlands, pamwe inotonhora nzvimbo mumazuva anotevera. Anosimbisa kukosha kwekudziya. Izvi zvakare zvinoita kuti mhepo ifambe. “Zvirinani shandisa hita yemagetsi. Ne gasi kana dizizi hita, nyatsoteerera kugadzirwa kwe CO₂. "Unogona zvakare kutanga kufamba kwemhepo nekupinza mweya mukati, asi ipapo dambudziko rinogona kufamba richienda muchigadzirwa kana tembiricha misiyano ikamuka imomo nekuda kwekukwezva kwechigadzirwa chinokonzeresa.
Den Engelsen anokurudzira kudurura chero hunyoro uye kutsiva CO₂ nekuvhura gonhi rekunze mumadhosi. Zvichida masikati, kana tembiricha yakanyanya yasvika. Iyo tembiricha yezuva nezuva maitiro angangove akakwirira kwazvo mumazuva anouya. Pakati pezuva, kudziya kuri muzuva uye nemhepo diki kunogona kusvika padhuze nechando.
Delphy chipangamazano Paul Hooijman, uyo anoshanda mumatunhu eFlevoland neNoord-Holland, anobvumirana. “Hakuna mamiriro akafanana. Tarisa uone kana maturusi acho akadzivirirwa zvakanaka uye kuti masutire acho akavhara zvakanaka, kunyanya mumatumba ekare ekuchengetedza. Kana iwe uine kamuri yekumisikidza, unogona kufefetedza mukati nekushandisa ino kamuri uko isingamise chando. Ini handitarisiri chero matambudziko nezvitsva zvekuchengetera zvivakwa zvine yepakati aisle. ”
Varimi vanorimika uye varimi vemiriwo vemumunda vari kugadzirira mamiriro ekunze echando
Pasina chitofu condensation inotyisidzira mudura rekuchengetera nekuda kwechando chakanyanya kutonhora
/ kuchengeta-iko-kukohwa / storages /
Tags: Potato Kuchengetamatambudziko mukuchengetedzachengetedzo
Munda wadiridzwa - 1 mukana gadzira nzvimbo yakatenderedza
Chlorine IPC inotsiva inokonzera kushushikana kwakawanda
"Ndinochengeta mbatatisi isina hutachiona pasina kunetseka"
CZAV inonyevera pamusoro pekumera mbatatisi
Kuderedza kwekutanga kurasikirwa uremu kiyi mukudzora mbatatiki kumanikidza kupwanya